For MIET post graduate students ...: အဆင့် (၄) Совет အဖွဲ့မှလက်ခံပြီးနောက် Автореферат ဖြန့်ခြင်း
အဆင့် (၄) Совет အဖွဲ့မှလက်ခံပြီးနောက် Автореферат ဖြန့်ခြင်း
Заседание ပြီး၍ Совет မှမိမိစာတမ်းကိုလက်ခံပါက Секретарь диссертационных советов ဖြစ်တဲ့ Нина Григорьевна Максименко မှ Диссертация လက်ကျန်သုံးအုပ် နှင့် Автореферат စာအုပ်ချုပ်ရန် ပြောပါမည်။ Нина Г.М. ကိုပေးရမယ့်၊ပြရမယ့် စာရွတ်စာတမ်းတွေကတော့ -
၁) စာအုပ်ချုပ်ပြီးသား Автореферат နမူနာတစ်အုပ် (နောက်ပိုင်းတွင်လိုသလောက်ထက်တောင်းမည်။)
၂) စာအုပ်ချုပ်ပြီးသား Диссертация လက်ကျန်သုံးအုပ် (ပြယုံသာ၊ပေးရန်မလို)
၃) Первый оппонент အတွက် Letter တစ်စောင် (ပေးရန်)
၄) Второй оппонент အတွက် Letter တစ်စောင် (ပေးရန်)
၅) Первый оппонент နှင့် Второй оппонент နှစ်ယောက်ပေါင်း အတွက် Letter တစ်စောင် (ပေးရန်)
၆) Ведущая организация အတွက် Letter တစ်စောင် (ပေးရန်)
၇) Автореферат ဖြန့်ရန် Letter တစ်စောင် (ပေးရန်)
၈) Список рассылки တစ်စုံ (ပေးရန်)
ပထမဆုံးအနေနဲ့ စာအုပ်ချုပ်ပြီးသား Автореферат နမူနာတစ်အုပ်ကို Нина Г.М. အားပြရတဲ့ရည်ရွယ် ချက်ကတော့ အဲဒီ Автореферат ပြမှ မိမိ Defense လုပ်ရမယ့် နေ့၊အချိန်နဲ့အခန်း ကိုသက်မှတ် ပေးမှာ မို့လို့ပါ။
Автореферат ချုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ မိမိ Совет ရဲ့ Ученый секретарь လက်မှတ်ကိုအရင်ဆုံးယူရ မှာပါ။ Автореферат ရဲ့ဒုတိယစာမျက်နှာမှာထိုးပေးပါလိမ့်မယ်။ မိမိ၏ Специальность ဘယ် Совет (Д212.134.01, Д212.134.02 စသဖြင့်)တွင်ပါဝင်ပြီး မိမိ Совет ၏ Ученый секретарь ဘယ်သူဖြစ်သည်ကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ လက်မှတ်ယူပြီးပါက စာအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက် Диссертация နည်းတူ Заявление လိုပါတယ်။ Заявление ကိုရုံးခန်းနံပါတ် မှာ တောင်းလို့ရ ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် Scan ဆွဲထားသော Заявление အလွတ် ကို ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ်။ ပရင့် ထုတ်ရင်တော့ စာရွတ်တစ်ရွတ်ထဲမှာ ရှေ့ခြမ်းနောက်ခြမ်း ထုတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြည့်ပုံဖြည့်နည်းနမူနာ ပုံစံကိုတော့ ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ်။ Заявление ဖြည့်ပြီးရင်တော့ ဌာနမှူးလက်မှတ်နဲ့ Проектор လက်မှတ်လိုပါတယ်။ ဌာနမှူး (ИПОВС မှာဆိုရင်တော့ Гагарина) လက်မှတ်ကိုအရင်ယူရမှာပါ။ ပြီးရင်တော့ Проектор လက်မှတ်ရဖို့အ တွက် 7-ой корпус က Проектор по Научной работе ရဲ့ ရုံးခန်းဖြစ်တဲ့ ရုံးခန်းနံပါတ် 7223 (ရုံးခန်းဖွင့်ချိန် 09:00-17:00) ကိုသွားပေးရမှာပါ။ ညနေပိုင်း (သို့) နောက်တစ်ရက်ပြန်လာယူခိုင်းမှာပါ။ ဌာနမှူးလက်မှတ်ကော Проектор လက်မှတ်ပါရရင်တော့ စာအုပ်ချုပ်ဖို့ ရုံးခန်းနံပါတ် ကိုပြန်သွားပြီး အဲဒီ Заявление နဲ့ ပရင့်ထုတ်ထားတဲ့ Автореферат တစ်စုံ (မိမိ Совет ရဲ့ Ученый секретарь လက်မှတ်ပါပြီးသာတစ်စုံ)ကို ပေးရမှာ ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ Автореферат က (၈၀) စုံ စာအုပ်ချုပ်ရမှာပါ။ ဒီနေရာမှာတော့ Диссертация လိုမျိုး စာအုပ်တစ်အုပ်ချုပ်တိုင်း ပရင့်ထုတ်ပြီးသား တစ်စုံ ကိုပေးစရာမလိုပါဘူး။ Автореферат တစ်စုံ ပေး ယုံနဲ့ သူ့ဘာသူ အုပ်ရေ (၈၀) လုံးပွားပြီးချုပ်ပေးမှာပါ။ နောက် (၃)ရက်အကြာပြန်လာယူဖို့ ချိန်းမှာပါ။ နောက် (၃) ရက်ပြီးရင်တော့ စာအုပ်ချုပ် ပြီးသား Автореферат ရပါပြီ။ နမူနာတစ်အုပ်အား Нина Г.М. အားပေးလို့ရပါပြီ။
Диссертация စာအုပ်ချုပ်ပုံချုပ်နည်းကို အဆင့်(၂)တွင် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ချုပ်ပြီးပါက Секретарь диссертационных советов ဖြစ်တဲ့ Нина Г.М. ကိုပြယုံပါပဲ။
Letter နမူနာကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Letter ပြင်ဆင်ပြီးပါက မိမိ Совет ၏ Ученый сетретарь လက်မှတ်ကိုထို Letter ပေါ်မှာထိုးခိုင်းရမှာပါ။ လက်မှက်ယူပြီးပါက Нина Г.М. ကိုပေးလို့ရပါပြီ။
Letter နမူနာကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ထို Letter ရေးရာတွင် ကျောင်းတံဆိပ်ရိုက်ပြီးစာရွတ်ပေါ်တွင် (на бланке) print ထုတ်ရမှာပါ။ ကျောင်းတံဆိပ်ရိုက်ပြီးသားစာရွတ်အလွတ် (Бланк) ကို секретарь диссертационных советов ဖြစ်တဲ့ Нина Г.М. ထံတွင် တောင်းနိုင်ပါသည်။ Letter ပြင်ဆင်ပြီးပါက မိမိ Совет ၏ Ученый сетретарь လက်မှတ်ကိုထို Letter ပေါ်မှာထိုးခိုင်းရမှာပါ။ လက်မှက်ယူပြီးပါက Нина Г.М. ကိုပေးလို့ရပါပြီ။
Letter နမူနာကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Letter ပြင်ဆင်ပြီးပါက မိမိ Совет ၏ Ученый сетретарь လက်မှတ်ကိုထို Letter ပေါ်မှာထိုးခိုင်းရမှာပါ။ လက်မှက်ယူပြီးပါက Нина Г.М. ကိုပေးလို့ရပါပြီ။ ထို Letter ပေါ်တွင် Defense လုပ်မည့် နေ့၊အချိန်နှင့်အခန်းတို့ကို ဖြည့်ပေးပြီး Автореферат ဖြန့်ရန် ပြန်ပေးမှာပါ။
နမူနာကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Список рассылки ပြင်ဆင်ပြီးပါက မိမိ Совет ၏ Учёный секретарь လက်မှတ်ကို Список рассылки ပေါ်မှာထိုးခိုင်းရမှာပါ။ လက်မှတ်ယူပြီးပါက Нина Г.М. ကိုပေးလို့ရပါပြီ။ ပေးပြီးပါက Нина Г.М. မှ သူ့အားပေးရမယ့် စာအုပ်ချုပ်ပြီးသား Автореферат အရေအတွက်ကို တွက်ပြပြီး တောင်းပါမယ်။ Автореферат ၏ ဒုတိယစာမျက်နှာတွင် မိမိ Defense လုပ်မယ့် နေ့၊အချိန်၊ ဖြန့်မယ့်နေ့စွဲ တို့အားဖြည့်ပြီး သူတောင်း တဲ့အရေအတွက် တိုင်း ပေးယုံပါပဲ။ Автореферат နမူနာအား ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါသည်။
အထက်ပါစာရွတ်စာတမ်းများပေးပြီးပါက Автореферат စတင်ဖြန့်လို့ရပါပြီ။
ကျောင်းပြင်ပရှိအဖွဲ့စည်းများသို့ဖြန့်ရန် ပထမဆုံး မိမိဖြန့်မည့် Автореферат များ ပေါ်တွင် Defense လုပ် မည့် နေ့၊အချိန်နဲ့ ဖြန့်မယ့်နေ့စွဲ တို့ကိုဖြည့်ရပါမည်။ ထို့နောက် မိမိ Совет ၏ Ученый секретарь လက်မှတ်ထိုးထားသော Автореферат ဖြန့်ရန် Letter ပေါ်တွင်လည်း Defense လုပ် မည့် နေ့၊အချိန်နဲ့ အခန်း တို့ကိုဖြည့်ထားပြီးဖြစ်ရပါမည်။ ထို Letter ကို ပို့ရမည့်အရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီး ကော်ပီဆွဲ ရပါမည်။ ထို Letter မှာ တူညီသော (၃) နေရာပါသဖြင့် Letter တစ်စောင်ကို (၃) ပိုင်းပိုင်း ပြီး ပို့ရမည့်နေရာတစ်နေရာအ တွက် တစ်ပိုင်းဆီ Автореферат နဲ့အတူ စာအိတ်ထဲထည့်ပို့ရမှာပါ။ စာအိတ်အလွတ်များကို 1-ой корпус က Канцелярия ရုံးခန်းဖြစ်တဲ့ ရုံးခန်း နံပါတ် 1107 (ရုံးခန်းဖွင့်ချိန် 10:00 - 17:00, နားချိန် 12:00-13:00) မှာလိုသလောက်တောင်းလို့ရပါတယ်။ စာအိတ်ပေါ်တွင် ကပ်ရန် သီးသန့်ပြင်ထားသေား Список рассылки ကို ဒီမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ လိပ်စာကိုစာအိတ်မှာကပ်ပြီးပါက ထိုလိပ်စာတွင်ပါသော Post code ကို စာအိတ်ပေါ်ရှိသူပေးထားသော Blank Format အတိုင်းဖြည့်ပေးရမှာပါ။ နမူနာစာအိတ်ကို ဒီမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Sender နေရာတွင်ဘာမှဖြည့်စရာမလိုပါ။ စာအိတ်တွင်လိပ်စာကပ်ပြီး Post code ရေးပြီးပါက Letter အပိုင်းတစ်ပိုင်းဆီနှင့် Автореферат တစ်အုပ်ဆီကိုစာအိတ်တွင်ထည့်ပြီး 1-ой корпус က Канцелярия ရုံးခန်းဖြစ်တဲ့ ရုံးခန်း နံပါတ် 1107 (ရုံးခန်းဖွင့်ချိန် 10:00 - 17:00, နားချိန် 12:00-13:00) သို့သွားပေးရမှာပါ။ ကျောင်းပြင်ပရှိအဖွဲ့စည်းများအတွက် Автореферат ပို့ခြင်းပြီးပါပြီ။
၂) Оппонент များသို့ဖြန့်ခြင်း
အထက်ပါစာရွတ်စာတမ်းများ (အမှတ်စဉ် ၃၊၄၊၅၊၆) ကိုပေးပြီးပါက Нина Г.М. မှ ညနေ (သို့)နောက်တစ်ရာက်ထပ်ချိန်းပါမည်။ Оппонент များသို့ မိမိ Автореферат နှင့် Диссертация ဖြန့်ရန် အပေါ်စာ၊ Letter များနှင့် ငွေရှင်းပေးမည့် Договор စာရွတ်စာတမ်းများပေးဖို့ပါ။ Оппонент တစ်ဦးချင်းဆီ အတွက်ရှင်းပြပါမည်။
က) 1-ой оппонент အတွက်
1-ой оппонент အတွက် အပေါ်စာတစ်စောင်၊ Letter (မူရင်းတစ်စုံ၊ကော်ပီတစ်စုံ) နှင့် ငွေရှင်းပေးမည့် Договор တစ်စုံ ကို မိမိမှတစ်ဆင့် 1-ой оппонент အား Нина Г.М. မှပေးခိုင်းပါမည်။ Автореферат နှင့် Диссертация တစ်အုပ်ဆီပါတပါတည်းယူသွားပြီးပေးရမှာပါ။ Letter ကော်ပီတစ်စုံပေါ် တွင်နေရာလွတ်တနေရာတွင် ရရှိကြောင်းလက်မှတ်ကို 1-ой оппонент အားထိုးခိုင်းရပါမည်။ Договор ၏ နောက်ခြမ်းတွင်လည်း လက်မှတ်ထိုးရမည့်နေရာတွင် 1-ой оппонент အားထိုးခိုင်းပြီး နောက်ခြမ်းနေရာလွတ် တွင် 1-ой оппонент ၏ ငွေလွဲလက်ခံနိုင်မည့် ဘဏ် account ကိုရေးခိုင်းရပါမည်။ ထို့နောက် ထို Letter ကော်ပီတစ်စုံနှင့် Договор ကို Нина Г.М. အားပြန်ပေးရပါမည်။
ခ) 2-ой оппонент အတွက်
1-ой оппонент နည်းတူ 2-ой оппонент အတွက် အပေါ်စာတစ်စောင်၊ Letter (မူရင်းတစ်စုံ၊ကော်ပီတစ်စုံ) နှင့် ငွေရှင်းပေးမည့် Договор တစ်စုံ ကို မိမိမှတစ်ဆင့် 2-ой оппонент အား Нина Г.М. မှပေးခိုင်းပါမည်။ Автореферат နှင့် Диссертация တစ်အုပ်ဆီပါတပါတည်းယူသွားပြီးပေးရမှာပါ။ Letter ကော်ပီတစ်စုံပေါ် တွင်နေရာလွတ်တနေရာတွင် ရရှိကြောင်းလက်မှတ်ကို 2-ой оппонент အားထိုးခိုင်းရပါမည်။ Договор ၏ နောက်ခြမ်းတွင်လည်း လက်မှတ်ထိုးရမည့်နေရာတွင် 2-ой оппонент အားထိုးခိုင်းပြီး နောက်ခြမ်းနေရာလွတ် တွင် 2-ой оппонент ၏ ငွေလွဲလက်ခံနိုင်မည့် ဘဏ် account ကိုရေးခိုင်းရပါမည်။ ထို့နောက် ထို Letter ကော်ပီတစ်စုံနှင့် Договор ကို Нина Г.М. အားပြန်ပေးရပါမည်။
ဂ) Ведущая организация အတွက်
Ведущая организация အတွက် အပေါ်စာတစ်စောင် နှင့် Letter (မူရင်းတစ်စုံ၊ကော်ပီတစ်စုံ) ကို မိမိမှတစ်ဆင့် Ведущая организация အား Нина Г.М. မှပေးခိုင်းပါမည်။ Автореферат နှင့် Диссертация တစ်အုပ်ဆီပါတပါတည်းယူသွားပြီးပေးရမှာပါ။ Letter ကော်ပီတစ်စုံပေါ် တွင်နေရာလွတ်တနေရာတွင် ရရှိကြောင်းလက်မှတ်ကို Ведущая организация မှတစ်ဦးဦးမှ အားထိုးခိုင်းရပါမည်။ ထို့နောက် ထို Letter ကော်ပီတစ်စုံ Нина Г.М. အားပြန်ပေးရပါမည်။
Оппонент များအတွက် Автореферат ဖြန့်ခြင်းအပိုင်းပြီးပါပြီ။
၃) MIET ဆိုဒ်သို့ဖြန့်ခြင်း
မိမိ ၏ Автореферат (words file)အား attach တွဲ၍ MIET ဆိုဒ်၏ Admin မေးလ်ဖြစ်သော webmaster@mail.ru သို့ပို့ပေးရမှာပါ။ ပို့ရာတွင်မိမိ Defense လုပ်မည့် နေ့၊အချိန်နှင့် အခန်းတို့အား မေးလ်ထဲတွင် ရေးပေး လိုက်ရပါမည်။ သီးသန့်ဖိုင်ဖြင့်ပို့လိုပါက နမူနာပုံစံအား ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါသည်။
Автореферат များဖြန့်ခြင်းအပိုင်းပြီးပါပြီ။ Автореферат များဖြန့်ပြီးပါက Отзыв များစောင့်ရမည်ဖြစ်ပြီး Отзыв များရပါကဆက်လုပ်ရမည့်အပိုင်း များကို အဆင့် (၅)တွင်ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါမည်။
ПРЕСЕДАТЕЛЮ ဖြစ်နေတယ် ... ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ဖြစ်ရမှာ